Dutchtown ရုပ်ရှင်ညများ• DutchtownSTL.org •ဒတ်ခ်ျတောင်း၊ စိန့်လူးဝစ္စ၊ MO
DT2 • Downtown Dutchtown မိသားစုနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သောရုပ်ရှင်ညများ၌အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပသည် Marquette ပန်းခြံ နွေရာသီကာလအတွင်း။ သင်၊ သင်၏မိသားစု၊ သင်၏အိမ်နီးချင်းများနှင့်အခြားသူအားလုံးကိုဖိတ်ကြားထားသည်။ ဤဖြစ်ရပ်များဖြစ်ကြသည် အခမဲ့ ရပ်ရွာကိုရန်။
အိမ်နီးချင်းများနှင့်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများညနေ ၇း၃၀ တွင်စတင်စုဆောင်းပြီးရုပ်ရှင်သည်အမှောင်ကျလာသည်နှင့်အမျှဆက်လက်ရိုက်ကူးမည်။
စပွန်ဆာ Dutchtown Movie Nights
2021 ၏ Movie Nights ကိုကမကထပြုသည် Dutchtown ရပ်ရွာတိုးတက်မှုခရိုင်, အလုပ်အကိုင်ချိတ်ဆက်မှု အကြမ်းဖက်မှုကို လူသာရင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့, မူရင်း Crusoe ရဲ့, စိန့်ဂျိုးဇက်အိမ်ရာစီမံကိန်း, စိန့်မာရိရဲ့အထက်တန်းကျောင်း, သောမတ်စ် Dunn သင်ယူရေးစင်တာနှင့် Tower Grove Neighborhoods Community Development Corporation ဖြစ်သည်.
သင်ကမကထဖြစ်လိုပါသလား? ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏နာမည်သို့မဟုတ်တံဆိပ်ကိုမြှင့်တင်ရေးပစ္စည်းများပေါ်တွင်ထည့်ရန်စီစဉ်ထားပြီး၊ ရုပ်ရှင်မတိုင်မီ“ ကြိုတင်ကြည့်ရှုခြင်း” တွင်သင်၏ဗီဒီယိုကိုလည်းပြသနိုင်သည်။ ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူထိတွေ့ Get စပွန်ဆာရွေးချယ်မှုများဆွေးနွေးရန်။
Movie Nights အတိတ်
2T ၏နွေရာသီတွင် DT2019 နှင့် Marquette Park ၏မဟာမိတ်များသည်သူတို့၏ပထမဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲများကို Marquette Park တွင်အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့ပြီး COVID-2020 ဖြစ်ပွားစဉ်အတွင်း Dutchtown အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်မိသားစုနှင့်လူမှုရေးအရဝေးကွာသောဖျော်ဖြေမှုကိုပေးခဲ့သည်။ 19 ခုနှစ်တွင်ရုပ်ရှင်ညဆက်လက်။
အိမ်နီးချင်းများသည် Marquette Park Field House ရှေ့တွင်စုရုံးခဲ့ကြသည် Dutchtown နွေရာသီ Vibes ဘို့ Jurassic Park က အားဖြင့်ပူးပေါင်းကြီးမားတဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ Mia ရဲ့ရယူထားသောပျော်မွေ့ ဖြစ်ရပ်ကာလအတွင်းအပေါ်ရေစာဖို့အရသာရှိတဲ့ cookies များကိုအတူ။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၏ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ညသည်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပူပြင်းသောနွေရာသီဇူလိုင်လည၌လူထုသည် Marquette Park သို့ထွက်လာခဲ့ကြသည် အဆိုပါ Incredible Field House ရှေ့မြက်ခင်းပြင်ပေါ်တွင် ငါတို့ကငါတို့သူငယ်ချင်းတွေထဲကပါလာတယ် Dutchtown တောင်အဝန်းကော်ပိုရေးရှင်း နှင့် Dutchtown အကြမ်းဖက်မှုကိုကုသပါ အဖွဲ့။
ရုပ်ရှင်ကြည့်သူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြသခြင်းအတွက်သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် Marquette Park Pool သို့သွားခဲ့ကြသည် ခိုခို! ညနေသည်ဤရာသီအတွက်ရေကန်နောက်ဆုံးဖွင့်ခဲ့ပြီးအိမ်နီးချင်းများစွာသည်ပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီရေကူးပြိုင်ပွဲအတွက်အခွင့်ကောင်းယူခဲ့သည်။
၂၀၂၀ Downtown Dutchtown နွေရာသီရုပ်ရှင်စီးရီးမှကမကထပြုခဲ့သည် DT2 • Downtown Dutchtown, Dutchtown ရပ်ရွာတိုးတက်မှုခရိုင်, Dutchtown တောင်အဝန်းကော်ပိုရေးရှင်း, စိန့်လူးဝစ်၏ Gene Slay ၏မိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများကလပ်, စိန့်လူးဝစ်လူသားများအတွက် Habitat, လူသာရင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့, မူရင်းခရူးဆူးစားသောက်ဆိုင်, Padua ၏စိန့်အန်တိုနီယို, သောမတ်စ် Dunn သင်ယူရေးစင်တာနှင့် Tower Grove Neighborhoods Community Development Corporation ဖြစ်သည်
Drive-In ရုပ်ရှင်: လွတ်လပ်ရေးနေ့
DT2 နှင့် စိန့်လူးဝစ်လူသားများအတွက် Habitat ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံး drive-in ရုပ်ရှင်ကို ၂၀၂၀၊ ဇွန် ၂၆ ရက်တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။
ကားမောင်းသူပေါင်း ၆၀ ကျော်နှင့်အတူတက်ရောက်ခဲ့သည် လွတ်လပ်ရေးနေ့ Habitat ရဲ့အဆောက်အ ဦး ၏ဘေးထွက်အပေါ် projected ။ ရုပ်ရှင်အပြင်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်၌အစားအစာကုန်တင်ကားများ၊ ရပ်ရွာလူထု၏သတင်းအချက်အလက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြသမှုများပါဝင်သည် Dutchtown ဂုဏ်ယူသောဗီဒီယို. Dutchtown Drive-In ရုပ်ရှင်အကြောင်းပိုမိုဖတ်ပါ.
Marquette Park ရုပ်ရှင်ည။ အသရေဖျက်မှုအတွက်သူလျှိုများ
ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ၂၂ ပေမြင့်သောလေ ထိုး၍ ကာတွန်းသရုပ်သရုပ်ကိုပြသသည့်ရုပ်ရှင်ညအား Marquette Park Field House ရှေ့တွင်တောင်ကုန်းသို့ပြန်သွားသည်။ အသှငျပွောငျးအတွက်သူလျှို။ ကျမတို့မှာအစားအစာကုန်တင်ကားတွေ၊ မဲဆန္ဒရှင်တွေမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ 2020 သန်းခေါင်စာရင်း သတင်းအချက်အလက်။ ဇူလိုင်လ ၂၀၂၀ Dutchtown Movie Night အကြောင်းပိုမိုဖတ်ပါ.
Marquette Park ရုပ်ရှင်ည။ ပင့်ကူအိမ်သို့
ကြည့်ရှုသူများသည် ၂၀၂၀၊ သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် Marquette Park Field House တွင်စုဝေးခဲ့ကြသည် Spider-Man: ပင့်ကူအိမ်သို့ နွေရာသီ၏နောက်ဆုံး Marquette ပန်းခြံရုပ်ရှင်ညသည်။ ကျနော်တို့အိမ်နီးချင်းများနှင့်ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းများကများစွာသောမဲပေးသူရှိခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၂၀၊ သြဂုတ်လတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်ရှင်ညအကြောင်းပိုမိုဖတ်ပါ.
NIC ရှိရုပ်ရှင်ည - ၄၂
အိမ်နီးချင်းများသည်ကားရပ်နားရန်နေရာတွင်စုရုံးခဲ့ကြသည် အိမ်နီးချင်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုစင်တာ တစ်စိစစ်ဘို့ 42 ၂၀၂၀၊ စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်တွင်ဂျက်ကီရော်ဘင်ဆင်အဖြစ် Chadwick Boseman အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်တင်ဘာလ ၂၀၀၀ ရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်အကြောင်းနောက်ထပ်ဖတ်ပါ.
လူငယ်ရုပ်ရှင်ည - Black Panther
ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးည Marquette Park တွင်ရုပ်ရှင်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ အိမ်နီးချင်း ၁၀၀ ကျော်တို့သည် Marvel's ကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြသည် Black က Panther မျက်နှာပြင်ကြီးပေါ်ကလေးတွေဒါဇင်ပေါင်းများစွာသည်ပီဇာ၊ ပြောင်းပေါက်နှင့် Ted Drewes Frozen Custard ကိုပျော်မွေ့ကြသည်။
Dive-In Movie ရန်ပုံငွေရှာ: Splash
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Dive-in Movie Fundraiser တွင်မိုးရွာခဲ့ဖွယ်ရှိသည်။ သို့သော်အလှူရှင်များသည်ရေကန်တွင်တိုးတက်မှုအတွက်ဒေါ်လာ ၇၀၀၀ ကျော်ရရှိရန်ကြီးမားသောငွေပမာဏကိုပေးခဲ့ကြသည်။ အဲဒီအကြောင်းအားလုံးဒီနေရာမှာ Read.
Dive-In ရုပ်ရှင်: Moana
ဒစ္စနေးရဲ့ poolside ပြ Moana ၂၀၁၀ ခုနှစ်သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင်ညနေပိုင်းရေကူးခြင်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေးအတွက် Marquette Park Pool သို့လူအုပ်ကြီးကိုဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။
ဒိန်းမတ် Dutchtown ရုပ်ရှင်ည